Schebler Deluxe DLX 108 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Carburetor ခန္ဓာကိုယ် (12/29/2011)… | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, reviews and discusssions
နေအိမ် → အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် → Schebler Deluxe DLX 108 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Carburetor ခန္ဓာကိုယ် (12/29/2011)...
4 Jun 2015 | စာရေးသူ: dima | တစ်ခုမှာမှတ်ချက် »
Schebler Deluxe DLX 108 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Carburetor ခန္ဓာကိုယ်, very rare, 1935 to 1939
အမျိုးအစား: Transportation and Vehicles
Original Schebler DLX 108 Carburetor Body, အဘို့ 1935 to 1939 74 Indian Chief Models, Very Rare! Description This auction is for an original Schebler Deluxe 108 carburetor body. According to my research, it’s for 1935 to 1939 74 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 74 မော်ဒယ်များ. The body is in overall good condition and is nice and clean.
NOTE: UPS will not ship to P.O. Boxes, so if you provideaP.O. Box address and cannot provideastreet address for UPS Ground Service, your order will ship Priority Mail. International orders can ship US Postal First Class International for items under4lbs or Priority Mail International for items over4ပေါင်.
The Motorcycle Obsession: What I want: အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic
20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2012 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အမှောင်မြင်း Killer ဂန္ထဝင်သံသရာ ~ motorboxer
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Indian Motorcycle Company Runs Out of Money News & Updates Motorcycle…
18.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် LIVE! Fake Twitter, Facebook accounts misrepresenting my views: Shah…
16.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Steve McQueen’s Indian Big Chief (restored by Von Dutch) — Silodrome
14.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Another nice Indian article » Indian Motorcycles Victory Motorcycles…
11.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ပထမဦးဆုံးအစီးနင်: 2014 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic, စပျစ်သီးနှင့်မင်းတို့ကလည်း – Cycle News
11.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် The Indian Motorcycle Returns in All Its Glory – WSJ.com
10.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Orientation Edition
မှတ်ချက်များ " Schebler Deluxe DLX 108 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Carburetor ခန္ဓာကိုယ် (12/29/2011)…"
hi သင်သည်ရောင်းချဘို့ဤရှိသည် Do သို့မဟုတ်?
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down Brammo Enertia စက်ဘီး Kawasaki ER-6n တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype Ducati 60 စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix ဆူဇူကီး AN 650 Bajaj Discover ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Ducati Diavel ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Aprilia Mana 850 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic ဟွန်ဒါ DN-01 Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဆူဇူကီး Colleda CO Ducati Desmosedici GP11 စမတ် eScooter